Soraty amin'ny Gazetiko ny fikarohana nataoko
Mila fanampiana amin'ny fanoratana matihanina? Makà taratasy misy kalitao avo indrindra amin'ny taratasy fanoratako tsara indrindra ho an'ny taratasy fikarohana momba ahy voasoratra amin'ny fenitra akademika rehetra.
Torohevitra momba ny fomba fanoratanao ireo taratasim-pikarohako
Rehefa te hahalala ny fomba fanoratanao ny taratasim-pikarohako ianao dia misy safidy maro samihafa azo atao. Manomboka amin'ny siansa fototra ka hatramin'ny tantara, toekarena, filozofia, literatiora ary na dia ny lalàna aza dia misy mpamatsy tolotra azo ampiasaina amin'ny lohahevitra rehetra.
Ohatrinona no andoavanao vola amin'ny mpanoratra iray hanoratanao ny taratasinao? Ny fomba tsara indrindra hahazoana hevitra sarotra dia ny mangataka vitsivitsy amin'ireo namanao sy havanao hanoratra taratasy momba ny lohahevitra akademika. Imbetsaka, ireo mpanoratra ireo dia handoa ambany noho ny saram-pianarany, izay mety ho mitombina. Serivisy fanoratana taratasy mora vidy matetika dia manome taratasy ho an'ny vidiny mirary nefa mbola mitazona mari-pahaizana matihanina.
Safidy iray hafa hanoratako ny taratasim-pikarohako ny manakarama mpampianatra iray izay hanampy anao amin'ity dingana ity. Ireo tutors dia afaka manampy anao hahita ny lohahevitra tsara indrindra ary hampiasa ny teknika fikarohana mety hamoronana ilay taratasy, mandritra ny fihazonanao naoty tsara.
Ny fomba fanoratana ny taratasim-pikarohako dia sarotra kokoa noho ny fieritreretanao azy. Tsy maintsy mandalina be momba ny taratasy ianao, indrindra raha mampiasa mpampianatra ianao hanampy anao amin'izany asa izany. Na dia mety tena ilaina aza ny fampianarana, dia mety handany vola kely ihany koa. Zava-dehibe ny handanianao ny fotoana ilaina rehetra hianarana ny fomba fikarohan-tena araka ny tokony ho izy, ary ny tsy hahatonga anao tsy hanadino ny fikarohana.
Mety hiatrika fanamby ianao amin'ny fitadiavana tonian-dahatsoratra hanovana ny taratasim-pikarohanao. Raha mikasa ny hamoaka ny taratasim-pikarohanao ianao, tena zava-dehibe ny tonian-dahatsoratra satria izy no tompon'andraikitra amin'ny fahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fenitry ny diary dinihin'ireo mpiara-miasa ilay gazety.
Ho fanampin'izay, ny taratasim-pikarohana sasany dia mety mitaky fanampiana fanampiny avy amin'ny mpanoratra rehefa vita izany, toy ny fanamarinana ny zava-misy. Ilaina koa ireo mpanampy amin'ny fikarohana amin'ny tetikasa sasany.
Farany, tokony hieritreritra ny hanakarama serivisy fanoratana ianao raha mikasa ny handray mpanonta. Ny mpanoratra iray dia afaka manitsy ny taratasinao maimaimpoana raha mangataka amin'ny tonian-dahatsoratra ianao, saingy matetika dia tsy ilaina izany. Raha hainao ny manoratra ny taratasim-pikarohako ary mahatoky tena amin'ny asanao ianao, dia tsy mila mandoa vola amin'ny fanampiana amin'ny fanitsiana na fanitsiana.
Mety ho elaela ianao vao hahay hanoratra ny taratasiko fikarohana, indrindra raha vao manoratra ianao. Mety hahatsapa ho sorena ianao raha ny amin'ny sehatry ny fanovana. Misy toro-hevitra tsara azo omena anao hanampy anao eny an-dàlana, na izany aza, amin'izay ianao ho vonona tsara kokoa amin'ny asa soratanao akademika rehetra.
Ataovy izay hahazoana antoka fa azonao tsara ireo taratasim-pikarohanao talohan'ny nanoratanao azy ireo. Ohatra, mety te hampiditra bibliôgrafia ianao, saingy mila mahatakatra ny antony tsy nampidiranao an'io fampahalalana io alohan'ny nanoratanao ny taratasim-pikarohanao. Mila mahatakatra tsara ny lohahevitrao ianao raha hanoratra taratasy fikarohana mahomby.
Faharoa, raha mampiasa serivisy fanoratana ianao hanovana sy hanitsiana ireo taratasim-pikarohanao, dia alao antoka fa manana fifandraisana miasa amin'ny serivisinao an-tsoratra ianao. Tokony hiasa amin'ny serivisy fanoratana iray fotsiny ianao isaky ny mandeha. Te-hihazona fifandraisana miasa tsara eo aminao sy ny serivisinao amin'ny fanoratana ianao, satria mila ny fanampian'izy ireo sy ny fidirany amin'ny tetikasa ho avy.
Fahatelo, rehefa miresaka fikarohana dia ho hitanao fa misy tranokala sy lahatsoratra maro afaka manome fampahalalana sy loharano sarobidy izay hanampy anao hikaroka. amim-pahombiazana.
Raha mampiasa ny torohevitra voatanisa eto ianao dia ho hitanao fa mora kokoa ny mianatra manoratra ireo taratasiko fikarohana. ary miaraka amin'ny ezaka sy fampiharana kely dia hanomboka hahita valiny amin'ny taratasim-pikarohanao ianao amin'ny fotoana fohy.